Sidee Flibanserin U Caawisaa Haweeney Hormoonka Galmada
/blog/Gallery/Sidee Flibanserin U Caawisaa Haweeney Hormoonka Galmada
Posted on 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Jiritaanka galmada waxaa la rumeysan yahay inuu ku badan yahay ragga, oo uu nasiib u leeyahay; waxaa jira xulashooyin badan oo daaweyn ah oo laga dooran karo dhammaantood laga bilaabo Viagra, Cialis, iyo daroogada ED. Waxay kaloo leeyihiin daaweyn hormoon ah si ay gacan uga geystaan ​​soo celinta wadashaqayntooda galmada. Haweenka ayaa dareemaya in laga saaray tan. Nasiib wanaagse, iyaduna ikhtiyaar ayay leeyihiin. Uma baahna inay la dagaallamaan damacyada galmada lumay, mushkilad horseedday burburin xiriir aad u badan. Iyada oo Flibanserin (167933-07-5), waxay leeyihiin hab lagu xoojiyo xiisaha galmada.
Waa maxay Flibanserin
Flibanserin (167933-07-5), kaas oo lagu iibinayo magaca hoostiisa Addyi waa daawo loo isticmaalo daaweynta arrimaha haweenka ee ku dhaca premenopausal, gaar ahaan kuwa qaba cilad-kacsi rabitaan galmada. Waa maxay cilad-kacsi rabitaan galmo ku dhacda jinsi aad weydiiso? Tani waa xaalad lagu garto rabitaano galmo oo hooseeya, oo sababi kara dhibaato shaqsiyeed ama dhibaato. Cilladaasi ma aha inay ka dhalato isku xidhka arrimaha caafimaadka ama dhibaatooyinka cilaaqaadka. Sidookale, maahan arin ku imaanaysa dawo ama isticmaalka maandooriyaha.
Waa inaad ogaataa taas Flibanserin looma jeedo dumarka horay u soo gaadhay caadada. Sidoo kale, kuma habboona ragga. Daawadan waxaa lagu bixiyaa barnaamij gaar ah, taas oo macnaheedu yahay in qofku iska diiwaangaliyo barnaamijkan kahor intaanu dawada qaadan. Barnaamijkani wuxuu ka caawiyaa adeegsadayaasha inay bartaan faa'iidooyinka iyo halista ka imaanaysa isticmaalka daawadan, iyo sidaan, waxay ku gaari karaan go'aan wanaagsan haddii ay ku habboon tahay iyo in kale. Sidoo kale, adeegsadayaashu waa inay ogaadaan in dawadan loo adeegsan doonin sidii kor loogu qaadi lahaa waxqabadka galmada. Taabadalkeed, waxaa loola jeedaa in lagu caawiyo kuwa damacyadooda galmo hoos u dhacday iyada oo aan sabab loo helin.
Sidee bay Flibanserin u shaqeysaa haweenka?
Dumar badan ayaa shaki ka qaba inay isticmaalaan sheygan mana hubo inay isticmaalayaan iyo in kale. Sababta oo ah, waxay ka baqayaan in laga yaabo inaysan shaqeyn. Runtu waxay tahay, in kasta oo badeecadani shaqeyso, uma shaqeyso qof walba. Qof kasta si ka duwan ayuu arrintaas uga falceliyaa, sababta oo ah waxay u shaqeysay qof kale micnaheedu maahan inay sidaas oo kale adiga kuugu shaqeyn doonto. Si kastaba ha noqotee, 60% kuwa isticmaalay dawadan ayaa bixiyay dib-u-eegisyo wanaagsan waxayna soo sheegeen in daawada ay soo bandhigtay natiijooyin aad u wanaagsan.
Su’aasha ugu weyn, hase yeeshe, waa; sidee u shaqeysaa? Ma jirin raadsi cad oo laga helay habka loo adeegsado dawadan si loo soo saaro natiijooyinka. Si kastaba ha noqotee, cilmi baarayaashu waxay la yimaadeen aragti, iyagoo raacaya xaqiiqda ah in serotonin ay mas'uul ka tahay xakamaynta shaqada galmada, waxayna ogaadeen in Flibanserin (167933-07-5) wuxuu yareeyaa dhaqdhaqaaqa serotonin ee maskaxda. Tani, beddelkeeda, waxay soo celisaa rabitaanka galmada ee naagta. Sidoo kale, daawadu waxay leedahay xoogaa saameyn aan toos aheyn oo ku saabsan norepinephrine iyo dopamine, oo waliba kuxiran rabitaanka galmada ee la xoojiyay.
Si ka duwan Viagra iyo daawooyinka kale ee la xiriira galmada ee ragga, dawadan ayaa ugu horreyntii ku shaqeysa bartilmaameedka maskaxda. Waxay sidaas yeelaysaa iyadoo la kordhinayo heerarka neurotransmitters-ka ee maskaxdaada u adeegsaneyso inay kiciso xiisaha galmada.
Guud ahaan, dawadu waxay riixdaa labada badhan ee waaweyn ee maskaxda ee mas'uul ka ah kor u qaadista rabitaanka galmada iyada oo la xakameynayo neurotransmitters-ka masuulka ka ah xakamaynta danaha galmada ee haweenka. Daawadan waxaa lagu soo bandhigay suuqa gadaal 2015 kadib markii FDA ay u oggolaatay daaweyn la soo iibsaday HSDD dumarka.
In kasta oo aysan jirin macluumaad cad oo ku saabsan nooca haweenka ay ka faa'iidaysan karaan daawadan, haddana waxaa aamin ah in daroogada loo isticmaalo in lagu daaweeyo damacyada galmada dabiiciga ah ee lumay. Tani waxay ka dhigan tahay inay shaqeynayso oo keliya haddii aysan jirin lacag rasmi ah oo salka ku haysa danaha galmada lumay, sida luminta xiisaha xiriirka ama sababo kale oo daroogada ah. Sidoo kale, maahan kuwa wax ka qabta dhibaatooyinka cudurka menopause. Daawada waxaa lagu tijaabiyay haweenka qaba HSDD. Dumarku dhammaantood waxay ahaayeen xiriir muddo dheer deggan, taasoo la micno ah in dhibaatadooda aysan ka imaan cilaaqaad aan faraxsaneyn. Waxay horey u lahaayeen rabitaan galmo waxayna ka walwaleen inay si tartiib tartiib ah u luminayaan waxayna raadinayeen hab ay ku soo celiyaan.
Haweenkaasi waxay la kulmeen arrintan muddo ku dhow shan sano, waxayna sheegteen inaysan lahayn wax galmada galmada ay u qabaan lamaanahooda jacaylka ah ama cid kale. Qiyaastii 50-60% haweenka waxay sifiican uga jawaabeen dawada, halka kuwa kale si xun ula falcleen. Qaarkood waxay heleen damac galmo shaqsiyaadka kale intii ay la shaqeyn lahaayeen, sidaa darteed ma jiro macluumaad cad oo ku saabsan sida jirkaagu uga jawaabi doono daawada.
Su'aasha kale ee sida caadiga ah la isweydiiyo ee sida dawadu u shaqeyso waa mudada ay qaadaneyso in natiijooyinka la arko. Mar labaad, qaybtani way ka duwanaan kartaa mid shaqsiyaadka kale, inta badan maxaa yeelay waxay si gaar ah uga falcelisaa. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka ayaa soo jeedinaya inay qaadaneyso illaa afar toddobaad in la arko natiijooyinka ugu horreeya iyo illaa iyo laba iyo toban toddobaad natiijooyinka ugu badan. Adiga, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad u isticmaasho si sax ah si aad u aragto natiijooyinka.
Qiyaasta lagu taliyay ee khubarada ayaa ah 100mg, oo ah in afka laga qaato, hal mar maalintii. Waxaa ugu wanaagsan haddii la isticmaalo inta lagu jiro sariirta ama waqtiga nasashada. Tani waa sababta oo ah qaadashada dawadan inta lagu gudajiro saacadaha shaqada ama marka jirkaagu firfircoon yahay wuxuu kuu gelinayaa halis inaad ku soo baxdo iskudhex xanuun, niyad jab nidaamka dhexe ee neerfaha, hypotension, ama waxaad ku geli kartaa shil.
Maxaa dhacaya haddii aad seegto qiyaasta daawada?
Hadaad seegto Flibanserin qiyaasta inta aad seexanaysid, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto ilaa sariirta xigta si aad u maamusho daroogada.
ADDYI xad dhaafka
Ku badinta dawadan macnaheedu maahan inaad ka dhakhso badan natiijooyinka. Taabadalkeed, waxay kuu keeni doontaa oo keliya waxyeelooyinka. Waxaa lagu talinayaa haddii aad si shil ah u baddasho ama aad tuhunto inaad sidaas sameysay, raadso daryeel caafimaad isla markaaba.
Goormaad joojinaysaa isticmaalkeeda?
Waa inaad joojisaa adeegsiga dawadan kadib sideed usbuuc isticmaalka kadib adigoon wax horumar ah sameyn. Sidii aan horayba u soo sheegnay, dawadu waxay u shaqaysaa si ka duwan dadka kale. Qaarkood waxay bilaabi karaan inay natiijooyinka isla markiiba arkaan, qaarna waxay qaadan karaan xoogaa waqti ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaysan ku qaadan wax ka badan sideed toddobaad inaad la kulanto xitaa horumar yar. Haddii taasi dhacdo, waxay muujineysaa in sheygu uusan kugu habboonayn, waxaana ugu wanaagsan haddii aad joojiso isticmaalkeeda.
Wax ka badalida qiyaasta daawada
Iyada oo ku xidhan duruufaha, waxaad ku beddeli kartaa qaddarkaaga mid dhexdhexaad ah ama xoog leh iyadoo lagu saleynayo horjoogeyaasha CYP3A4. Waxaa lagu talin karaa haddii aad soo bandhigeyso isticmaalka Flibanserin ku saleysan mid dhexdhexaad ah ama xoog leh CYP3A4 inhibitor, ka dibna waa inaad bilawdaa ka dib qiyaastii laba toddobaad laga bilaabo qiyaasta daawada ugu dambeysa ee CYP3A4 inhibitor. Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho xannibaadda 'CYP3A4' sida loo adeegsado isticmaalka 'FLIBANSERI', waa inaad sameysaa laba maalmood kadib cabirkii hore ee Flibanserin.
Waa inaad ogaataa in dawadani ay ku habboon tahay kuwa haysta HSSD, taasoo la micno ah inay arrinta ku dhacda dadka aan qabin wax dhibaato caafimaad ah. Sidoo kale, dhibaatadu ma aha inay ku ekaato walxaha kale ama caadada 'menopause'. Haddii aad leedahay HSDD iyadoon loo eegeyn xaaladda, lammaanaha, ama kicinta, markaa sheygan adiga ayaa iska leh. Haddii aad lumisay damac galmo awgeed maxaa yeelay walaac, waxaad ku mashquulsaneyd shaqada, ama aadan xiriir wanaagsan la laheyn lammaanahaada, daawadan maahan waxaad ubaahantahay inaad xalliso dhibaatooyinkaaga. Looguma tala gelin kor u qaadida waxqabadka galmada, laakiin taa bedelkeeda, waxaa loogu talagalay dhiirrigelinta hormoonnada galmada. Sidoo kale, waa inaysan ragga isticmaalin.
Waa maxay saamaynaha dhinaca isticmaalka Flibanserin?
Wax kasta oo faa iidooyin leh waxay leeyihiin waxyeelo sidoo kale. Waxa ugu weyn Faa'iidada Flibanserin waa in ay bixiso horumar muuqda oo laga dareemayo waditaanka galmada. Waxay si dhammaystiran ugu shaqaysaa sidii daaweynta HSDD oo leh daraasad cilmiyeed iyo tijaabooyin isdaba joog ah oo muujinaya inay ku dambayso kordhinta rabitaanka galmada iyo xiisaha. Si kastaba ha noqotee, daawadu markasta waxtar ma leh, waana inaad ku isticmaashaa maskax furan. Daawada looma jeedin daaweynta daweynta rabitaan galmo oo lumisa taasoo ay ka dhasheen dawo jirta ama caafimaad kale ama xaddidaad jireed. Sidoo kale, faa'iido ma laha haddii aad hadda isticmaaleyso medsyo kale oo saameyn kara damaca galmadaada, sida daawada lidka diiqadda. Waxaad u baahan tahay inaad takhtarkaaga u oggolaatid inuu marka hore qiimeyn ku sameeyo si loo go'aamiyo inaad ku habboon tahay isticmaalka daroogada iyo haddii ay adiga kuu shaqeyn doonto.
Waa inaadan isticmaalin dawadan haddii aad leedahay dhibaatooyin caafimaad oo salka ku haya sida cudurka wadnaha, dhiig karka, ama sokorowga. Waa inaad u oggolaataa takhtarkaaga inuu kaa caawiyo maaraynta arrimaha marka hore ka hor intaadan isticmaalin daroogada.
Kahor oggolaanshaha isticmaalka, daroogada ayay tahay inay tijaabiso FDA si loo go'aamiyo inay aamin tahay isticmaalka. Si kastaba ha noqotee, ADDYI ka mid ah daroogadaas aan waligood go'aan laga gaarin inay aamin yihiin in la isticmaalo. Daaweyntu waxay caddeysay inay waxtar weyn u leedahay kordhinta Libido iyo caawinta haweenkaas leh damacyada galmada ee lumay. Waxaa la helay inay leedahay faa'iidooyin kaladuwan iyo sidii badbaado xiriir weyn leh. Si kastaba ha noqotee, FDA waxay ogaatay in dawadu ay la imaan karto qaar ka mid ah waxyeelooyinka, dhammaantoodna waxay ka yimaadaan madax wareer, hurdo la'aan, iyo lallabo. Kuwaasi waa kuwa guud Waxyeelooyinka Flibanserin, laakiin FDA waxay ka walaacday laba waxyeelooyin oo muhiim ah oo ay dadku ka walwalaan kuwaas oo kala ah;
Haddii si khaldan loo isticmaalo, dawadan waxay leedahay waxyeelo suuxin, shaqsiyaadka qaarna waxay u isticmaalaan sababao qaldan iyagoo isku dayaya inay helaan deganaan, hurdo wacan. Haddii taasi dhacdo, adeegsadayaashu waxay seexdaan saacado ka badan intii ay ku habboon yihiin. Tan, iyaduna, waxay saamaysaa wax soo saarkooda ugu horayn sababtuna tahay feejignaan la'aan iyo hurdo la'aan saacadaha qaldan.
Suuxdin awgeed hoos u dhaca cadaadiska dhiigga
Tani waa saamaynta dhinaca ugu halista badan, waxayna inta badan dhacdaa marka daroogada loo isticmaalo wakhti qaldan. Sidii aan horayba u soo sheegnay, dawada waa in la istcimaalo hurdada ama nasashada. Maaraynta dawada inta lagu jiro saacadaha hurdada ama marka jidhkaagu firfircoon yahay waxay u horseedaa hoos u dhigista dhiig karka waxayna kaa dhigi kartaa inaad suuxdo.
WAA MAXAY Digniinta Flibanserin?
Lagu qasbay khamriga
Markii lagu maamulo aalkolada, dawadan waxay kuu horseedi kartaa hoos u dhac dhiig karka, taas oo keenta dawakhaad aad u daran, daal, iyo daweynta, oo xitaa waad suuxsan kartaa waxyeeladaan. Waxaa lagu talinayaa in marka aad bilowdo isticmaalka Flibanserin, inaad joojiso cabitaanka khamriga. Xitaa qaddarka ugu yar ee aalkoladu waxay u horseedi kartaa waxyeelooyinka aan soo sheegnay.
Isku-dabooli kara xanuunka CYP3A4 dhexdhexaad ah ama xooggan
Haddii loo isticmaalo xoogsheegeyaasha YP3A4 xoog leh ama dhexdhexaad ah, waxaad u badan tahay inaad la kulanto kororka feejignaanta Flibanserin, taas oo noqon doonta mid aad u badan sida xad-dhaafka ah. Tani waxay, iyada oo, waxay kaa dhigeysaa inaad la kulanto waxyeelooyinka ka yimaada xad-dhaafida maandooriyaha. Tan, waa inaad ogaataa in isticmaalka maaliyadanihu uu yahay mid sharci-darro ah, taasoo la macno ah inaad u isticmaali karto oo keliya haddii duruufo kugu khasbo.
Ku takhasustay bukaannada qaba naafada beerkat
Daawada laguma talinayo shaqsiyaadka qaba culeyska beerka ilaa ay ka caawiyaan khabiir caafimaad. Waxaa lagu talinayaa inaad talo ka raadsato takhtar kaa caawin doona inaad maareyso naaquska beerkaaga ka hor intaadan bilaabin isticmaalka dawadan. Daraasadaha ayaa muujiyay in Flibanserin (167933-07-5) ay kordhisay soo-gaadhista dadka qaba culeyska beerka marka loo barbar dhigo kuwa leh beer caafimaad u shaqeynaya, kuwaas oo u kashifaya khatarta ugu badan ee horumarinta cudurka 'syncope', hypotension, iyo nidaamka dhexe ee neerfaha.
Ma jiraan daraasado cad oo muujinaya inuu badeecadan ku soo rogay wax khatar ah dumarka uurka leh ama kuwa nuujinaya. Sida lagu sheegay baaritaan lagu sameeyay xayawaanka, waxay muujisay in sunta kaliya ay ka dhaceyso oo keliya joogitaanka sunta hooyada. Waxyeelooyinka qaarkood muddadaas oo kale waxaa ka mid ah miisaanka oo kordha, hurdo la'aantu, iyo dawakhaad. Xayawaanku seexan jireen wax ka badan intii caadiga ahayd. Qaar ka mid ah xayawaanku waxay la kulmeen waxyeelo xagga taranka iyo koritaanka ah, oo ay kujiraan anshax dhismeed iyo miisaan lumis.
Weli lama go'aamin haddii budada Flibanserin (167933-07-5) wax saameyn ah ku yeesho qeybinta caanaha naaska aadanaha, sidoo kale lama oga inay saameyn ku yeelanayso dhallaanka naaska nuujiya. Daraasadaha lagu sameeyay jiirka ayaa muujiyay in dawada lagu soo rogay caano jiirka. Tan, waa aamin in la yiraahdo isticmaalka Flibanserin marka uur leeyahay ama naasnuujineyso waxay saameyn xun ku yeelan kartaa dumarka naasnuujinaya sida naasnuujinta, tanina waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa dhallaanka naaska nuujiya.
Flibanserin miisaan lumis
Sida laga soo xigtay daraasado badan iyo falanqaynta hoc post, haweenka postmenopausal iyo dumarka premenopausal ee dawadan u isticmaalay hypoactive Galmada rabitaanka khalkhalka waxay u badan tahay inuu miisaanka kaa dhimo. Aynu wajahno. Dumar badan ayaa miyir qaba miisaanka jirkooda waxayna ka baqayaan inay adeegsadaan wax kasta oo saameyn xun ku yeelanaya culeyskooda. Waa dareen noocan oo kale ah oo lagu ogaanayo in isticmaalka FLIBASERIN uusan wax saameyn ah ku yeelanaynin miisaanka dadka, laakiin taa beddelkeeda, waxay ka caawineysaa inay daadiyaan miisaan aad u badan. Haddii aad ku dhibtooneysay dhibaatooyinka miisaanka oo aad raadineysay qaab aan dadaal lahayn oo aad ku daadiso, daawadani waa mid lagu daray.
Baadhitaanka ku saabsan tan waxaa loo sameeyay si loo hubiyo haweenka, laakiin way nabad qabaan maadaama intooda badani ay ka caga jiidayaan inay qaataan dawada. Ka hortagga dawooyinka lidka ku ah cudurka lidka ku ah badankood waxaa lagu yaqaanaa inay keenaan culeys kordhin, dumarkuna waxay ka baqayaan in daaweyntani yeelan doonto saameyn la mid ah.
Arrinta ayaa ka dhalatay xaqiiqda ah in dawadan ay tahay mid yar oo ah 5-HT2C receptor 5-HT2C agonist inta badan waxay la xiriirtaa miisaanka oo yaraada, iyadoo ay ogolaatay FDA arintan iyo xaqiiqda Flibanserin waa mid yar oo siisay haweenka aragtida ay ku keeni karto iyaga si ay u helaan miisaan.
Sida kaliya ee loogu raaxeysto natiijooyinka ugu fiican waa haddii aad tahay iibso Flibanserin iibiyaha lagu kalsoonaan karo. Iyada oo ay kordhay baahida loo qabo badeecadan, waxaa kor u kacay alaab-qeybiyeyaasha sheeganaya inay bixiyaan tayada ugu fiican ee Flibanserin. In kasta oo qaar ay dantaada ugu fiican ka haysato wadnaha, qaar ayaa kaliya ka dib markii ay khayaaniyaan iibsadayaasha quus taagan. Waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad alaabta ka heshay shirkad aad si buuxda u aamini karto. Xitaa waad heli kartaa Budada dufanka halkaad xal uheshid ka hor intaanad hadal ahaan afkaaga ugu gudbin. Waqtigaaga qaado, sameyso cilmi-baaris dhameystiran si aad xaq u hesho Flibanserin iib ah. Daroogooyinku waa badeecad xasaasi ah, oo haddii mid khaldan la helo ayaa xaaladdaada ka sii dari karta sidii ay ahayd hadda.
Flibanserin waxay cadeysay inay xalka ugu fiican u tahay haweenka lumay rabitaankooda galmada iyada oo aan sabab loo helin. Si kastaba ha noqotee, waa inaad heshaa tayada ugu fiican ee sheygan oo aad u isticmaashaa si ku habboon si aad u aragto natiijooyinka. Sidoo kale, waa inaad u isticmaashaa maskax furan oo xusuusnow inaysan u shaqeyn adiga iyo sidoo kale inay u shaqeynaysay qof kale. Ha iloobin inaad heshid talobixinta takhtarka ka hor intaadan bilaabin isticmaalkeeda si loo go'aamiyo inaad tahay musharrax habboon.
Jane McCall, Dheddigga Viagra Flibanserin: Tilmaanta dhammaystiran ee Daaweynta Khilaafaadka Rabitaanka Jinsiga ee Dhibta Jirka (HSDD) iyo Kordhinta Liiska Haweenka Liido si loo Gaadho Udhamar Weyni Oo La Joojiyo Dareenka Dhibaatada; 1724181459
Amazon Digital Services LLC - Kdp Nala Daab, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Buugga Tilmaamaha Kaniiniga Kordhinta Jinsiga ee Dumarka oo Kordhiya Jinsiga Wadista wuxuuna ka caawiyaa Haweenka inay gaaraan Orgasm badan, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). "Farmashiistaha flibanserin". Faallooyinka daroogada CNS. 8 (2): 117–42.
Wax kasta oo ku saabsan Oxandrolone (Anavar), waxaad u baahan tahay inaad ogaato	Sidee Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ay ugu shaqeyso jirdhiska jirka